Yazi i-Airedale Terrier - Izinhlobo
Isitayela, ukuzethemba, isibindi, ukuhlakanipha, ukuphuma, futhi ubuwula - yini enye ongayicela esilwaneni, akunjalo?
Kepha uma uhlela ukuthenga noma ukusebenzisa i-Airedale, kuzofanele ufunde lonke ulwazi ngobuntu bayo, izidingo zalo, nakanjani, ngama-quirks alo.
Ake sithole ukuthi ngabe le yi-terrier ekufanele!
Umsuka: Yini eyaziwa nge-Airedale Terriers?
Ngabe ibukeka kanjani i-Airedale Terrier?
Isimo: Ingabe ama-Airedales ayizinja ezinhle zomndeni?
Ukunakekela i-Airedale Terrier yakho
Impilo ye-Airedale Terrier
Ibiza Malini Imidlwane Yase-Airedale Terrier?
I-Airedale Terrier VS. I-Welsh Terrier
Ufuna ukwazi ngama-Airedale Terrier Mixes?
Ngabe le nja izalelwe wena?
I-Airedale yadalwa ngokuzalanisa i-a Isi-Welsh Terrier ( I-Black and Tan Terrier ) , i I-Otterhound , phakathi I-Great Britain . Inhloso bekuwukwakha inja ekwaziyo ukuzingela izilwane ezincane futhi umdlalo omkhulu lapho uqeqeshwa kahle.
Abanye abantu bangahle babone nezimpawu zombili I-Irish Terrier futhi IBedlington I-Terrier e-Airedale.
Ama-airedales nawo abe nomthelela kwezinye izinhlobo, njenge IYorkshire I-Terrier . Ingakapheli iminyaka eyi-12 izalisene, zaduma kwezemidlalo.
Umbukiso wokuqala wezinja ungene Isigodi sase-Aire kwenzeka ngo-1864, lapho abahluleli bachaza khona lo mndeni njengobuhle kakhulu. Ngalesi sikhathi, abalandeli babuye babaqamba amagama bathi i-Airedale Terrier , yize lokhu kwaba semthethweni kuphela ngo-1886.
Ngesikhathi se- Ngekhulu le-19 , UMfula i-Aire isingathwe amaningi inja ibonisa njengendawo. Umbukiso wawudinga izinhlobo zeTerrier ukulandela igundane emanzini nokwenza ukubulala, okuholele ekuthandweni kohlobo.
Ngo-1900, i- I-Airedale Terrier Club yaseMelika yasungulwa. Baqale indebe ebizwa nge-Airedale Bowl, ekhombisa amagama alabo abaklonyeliswe ngeBest of Breed.
Ukufudumala kusetshenziswe ama-Airedales ku- Impi Yezwe I njengoba izinja ezigadayo , izinja eziqaphile , futhi ukuncinza . Abantu futhi babasebenzisela i- ukwelusa , njenge ukubuyisa , izinja ezisebenzayo , izinja ezizingelayo , futhi izinja zamaphoyisa .
UWarren Harding futhi UCalvin Coolidge babengabanikazi futhi bengabalandeli bohlobo. Ngo-1949, i- I-American Kennel Club ( I-AKC ) zibalwa i-Airedale Terrier 20 ukuthandwa, noma kunjalo selokhu kwehla.
Lolu uhlobo olukhulu kakhulu lwe-terriers; yingakho, njengoba sishilo ngaphambili, abantu bavame ukubiza lolu hlobo iNkosi yase Terriers . Futhi kwesinye isikhathi kubhekiselwa kubo njengo I-Bingley Terriers noma I-Waterside Terriers .
I-Airedale Terrier ‘S ikhanda lide futhi liyisicaba ukusuka kogebhezi kuya emakhaleni abo amnyama. Izindlebe zazo zisongwe ezinhlangothini, futhi zinamehlo amancane ansundu amnyama.
Izintamo zazo zigobhozela emhlane wazo omfishane, kanti amahlombe awo ayizicaba. Banemilenze emide, enemisipha elingana nomzimba wabo wonke.
Isifuba sazo side kodwa asibanzi futhi kwesinye isikhathi singaba nesichibi esimhlophe. Lawa ma-cuties anezinyawo ezincane, futhi uboya bawo bumhlophe futhi buzungezisa kancane.
Umsila we-Airedale mude futhi uqine, futhi abantu abawabeki njengesiko, yize abanye benza uma bengumdlwane.
I- I-American Kennel Club ithi imisila yezinja ekhombisa akumele igobeke emhlane, iqine, futhi ibe nobude obulinganiselayo.
Yize ukuthunyelwa kwezikebhe kungavumelekile emazweni athile ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, abantu bakwamanye amazwe basakwenza.
Usayizi: Ithola kangakanani i-Airedale Terrier?
I-Airedale Terriers inokuphakama kwe- Amasentimitha angama-21 kuya kwangu-23 (53 kuya ku-58 cm) ehlombe futhi ingafinyelela isisindo se- Amakhilogremu angama-70 (32 kg). Izinsikazi zifushane kancane futhi zinesisindo esingamakhilogremu angama-40 kuye kwangama-55 (18 kuya ku-25 kg).
Ngaphandle kokucabanga ngosayizi wazo, kufanele futhi ubheke leli zinga lomsebenzi. Ngalokho kusho, ama-Airedales akuzona izilwane ezifuywayo ezihlala abantu abahlala emafulethini.
Sibancoma ukuthi baye ekhaya elibanzi elinegceke elikhulu elinocingo olude, oluphephile .
Uzibuza ukuthi ngabe ikhona yini iMiniature Airedale Terrier? Akukho, kepha ungafuna i-pooch compact efana ne- I-Welsh Terrier . Zibukeka njengama-Airedales kepha mancane futhi awathandeki ngokuqhathaniswa namanye ama-terriers.
Ijazi nemibala ye-Airedale
Ijazi le-Airedale kungaba mnyama nokumnyama noma ukuqhuma no-tan, iningi kube yi-tan. Imvamisa zinomnyama noma ukuqhuma patch emhlane wabo futhi tan imilenze yabo, isifuba, isisu, futhi ekhanda.
Isifinyezo Kusho ukuxubana kwezinwele ezimnyama nomhlophe noma ezimpunga. Ama-airedales ane- ijazi elikabili , ngoboya obuthambile ku- ingubo yangaphansi nezinwele ezinde ezinde njengezengubo ephezulu.
Ijazi labo eliphezulu livame ukuminyene, kanti ijazi langaphansi lifushane futhi lithambile. Ijazi lolo hlobo luphansi, ngakho-ke udinga ukuluxubha njalo futhi ulungise ngezikhathi ezithile.
Izinwele zika-Airedale akufanele zibe zinde kakhulu njengoba kufanele zilele phansi futhi zisondele emizimbeni yazo.
Lokhu inja ehlakaniphile ilungile ngezingane, noma usayizi wazo nenjabulo yazo ingase ibe ngokweqile ezinganeni ezisencane kakhulu. Zombili izingane nezinja kufanele zithole ukuqeqeshwa okulungile kusenesikhathi ukwakha isibopho esifanele.
Abazali kufanele ngaso sonke isikhathi bagade ukuxhumana. Lezi cuties zingavikela kakhulu amalungu omndeni , okwenza kube yizinja zokuqapha ezinhle.
Njengemidlwane enentando eqinile, kungenzeka bangakhombisi uthando lwabo ngokugonwa kepha bajabulele ukuba phakathi kwabantu babo. I-Airedale yenza okuhle isilwane sasekhaya ngenani elifanele lothando.
Lapho benakwa kakhulu, mancane amathuba okuthi bavukele ebubini. Ama-airedales nawo angahambisana nezinye izilwane ezifuywayo, ikakhulukazi uma zikhula ndawonye.
Ukuzijabulisa kusukela esemncane umqondo omuhle wokuzivimbela ekujaheni noma ekuzingeleni ezinye izilwane.
Ziyizinja ezizimele, zivame ukuzingela ngaphandle kokufundiswa, futhi kungenzeka ukuthi zixoshe izilwane ezincane ezithathwa njengezilwane.
Ama-airedales nawo angabelusi abahle, noma ngabe kufanele unikeze ukuqeqeshwa okufanele; ngaphandle kwalokho, zingacasula izilwane ezinkulu.
Ngenkathi abantu befuya ama-Airedales ukuzingela nokusetshenziswa emibonisweni yokuzingela amagundane amanzi, bangababhukudi abahle, futhi bayathanda ukubhukuda.
Akufanele ubashiye bodwa isikhathi eside, ngoba lokhu kungaholela ekubhorekeni nasekuziphatheni okulimazayo. Badinga ukuzivocavoca njalo ukuze balahle amandla abo ngokweqile.
Ukuhamba ngakunye ngosuku kunganele, kepha sincoma okubili, kanye nendawo eningi engadini noma egcekeni lokudlala. Ungabanikeza namathoyizi ahlukahlukene ashukumisayo ukuze uwagcine ematasa ngenkathi ungekho.
Ama-terriers ayizinhlobo zomlomo ngokujwayelekile. Njengoba sishilo ngaphambili, abantu bafuya ama-Airedales ngokuzingela, ngakho-ke bavame ukukhonkotha ezintweni ababona ziyizisulu noma izinsongo.
Ukuqeqeshwa kokulalela kanye umphakathi kungasiza ngalokhu, njengoba befunda ukulandela imiyalo ebaqhelelanisa nezilwane abazibheka njengokudla.
Ukuya emakilasini okuqeqesha ne-pup yakho kuyinto edingekayo, ngoba kwesinye isikhathi kungaba yinselele ukuyiphatha.
Njengomphumela wobuhlakani babo nothando, ukuqeqesha inja yakho kungaba lula, noma kufanele uguqule ukuqeqeshwa ukugwema ukubadina.
Ukuqeqesha izimbiza noma yimuphi umdlwane kungaba yinselele; nokho, ukulandela lezi zinyathelo ezilula ingakusiza. Hlala wazi ukuthi lezi zinja zingabamba igqubu futhi zibe nolaka uma uziphatha kabi.
Sincoma okulandelayo amaphedi wokuqeqesha ukusebenzisa ngaphakathi.
I-Airedale’s ijazi elibubende kudinga ukunakekelwa okuncane, noma ngabe sincoma ukuxubha masonto onke nokuzilungisa ngezikhathi ezithile.
Ukuxubha inja yakho masonto onke kuyasusa izinwele ezifile lokho kuvame ukuchitheka ngokwemvelo futhi kudinge ukuhlanzwa okwengeziwe kwekhaya lakho.
Ungafunda ukucija inja yakho uwedwa, noma ungathola ifayela le- onedumela elihle umkhwenyana ukukwenzela lo msebenzi.
Umfundi wakho uzokhetha isimo sezulu esifudumele ngenxa yejazi labo elizacile; sincoma ukubavumela ukuba bangene ngaphakathi phakathi nezinyanga ezibandayo zonyaka.
Indlwana yenkukhu ingaba utshalomali omuhle uma ubashiya ngaphandle uma ungekho ekhaya.
Awudingi ukugeza i-pup yakho njalo, kepha kuwumqondo omuhle ukuyigeza kathathu noma kane ngonyaka ukubenza babukeke be-snazzy.
Qiniseka ukuthi uhlinzeka ngamathoyizi akho ahlala isikhathi eside kumfundi wakho uma ungekho ukuze uwagcine engakhathazeki.
Hlola izindlebe ze-pup yakho njalo ngokubomvu noma iphunga; uma kukhona okunye kwalokhu okukhona, kungcono ukubayisa kudokotela wezilwane ukuze bathole ukwelashwa.
Ukuvivinya i-Airedale Terrier yakho
Ama-airedales aphezulu amazinga amandla futhi kudinga inani elilinganisiwe lokuzivocavoca umzimba. Benza abalingani bokugijima abakhulu futhi bavame ukukhathala.
Bahlala bebancane ezinhliziyweni kude nezimpilo zabo futhi bathokozela ukudlala njalo. Kufanele uzilungiselele ukuchitha imizuzu engama-40 kuya kwengama-60 ne-pup yakho nsuku zonke ukuqeda amandla abo amaningi.
Ukuzilungisa: Ingabe i-Airedale Terriers hypoallergenic?
Njengoba sishilo ngaphambili, ukuzilungisa akudingi ukuthi kube okujwayelekile kakhulu, kepha kunalokho ukugcina ingane yakho ibukeka ihlakaniphile. Uma kufanele ube namathuluzi afanele nolwazi oluthile oluyisisekelo, ungazilungiselela inja yakho ngokwakho.
Khumbula ukuthi umdlwane wakho uzokujabulela ukuhlolwa kwe-vet kanye nemikhono uma unikeza ukuqeqeshwa okuhle kusuka ebuncaneni.
La ma-cuties anengubo ye-hypoallergenic futhi awachitheki kakhulu, ngakho-ke bambalwa abantu abathola izimpawu zokungezwani komzimba ngenkathi behlala nabo.
Izinwele zabo zingahle zibe nefindo uma ziba zinde kakhulu, kepha ungasebenzisa ikama ukuzikhumula ngesikhathi sokuxubha kwakho masonto onke. Banephunga elijwayelekile lenja ngenxa yamafutha esikhunjeni sabo, kodwa kuyinto ozojwayela ngayo.
Ukondla i-Airedale Terrier yakho
Kufanele unikeze inja yakho ukudla okunomsoco ngokwesisindo esinconyiwe seminyaka nobukhulu bayo. Kufanele ucabangele ikhwalithi ephezulu ukudla kwenja noma ukudla kokudla okuluhlaza ngemvume evela kudokotela wezilwane.
Bheka izinga lesisindo sabo, ikakhulukazi ngesikhathi sokuqeqeshwa, njengoba ukudla okuphezulu kwekhalori kungaholela ukukhuluphala ngokweqile .
Kufanele ufunde ukuthi yikuphi ukudla kwabantu okuphephile ukuthi kudliwe yimbuzi yakho nokuthi yikuphi okungekho ngaphambi kokubanika lutho kusuka kupuleti lakho.
Khumbula, lapho i-pup yakho isencane, kufanele idle ukudla komdlwane futhi idlulele ekudleni kwabantu abadala lapho isikhulile. Inja yakho kufanele ibe namanzi amasha ngaso sonke isikhathi.
Inja esikhulile izodla cishe izinkomishi ezintathu ze-kibble ngosuku, noma ngabe kufanele unamathele kusisindo esinconywe kupakethe lokudla.
Sikukwazisa ukuthi wondle injana yakho kabili ngosuku kunokuba ushiye ukudla ngaphandle usuku lonke. Lokhu kuzobasiza ukuthi badle inani elifanele futhi balinganise, ukuze bangalambi ngokuhamba kosuku.
Ungabhajetha cishe u- $ 68 wokudla ngenyanga nge-Airedale Terrier. Ukudla okukhethayo kukuwe, noma kufanele kunconywe udokotela wezilwane ukuqinisekisa ukuthi ilungele inja yakho.
Yize lezi zinja ezifanelekile ngokuvamile ziphilile, zinokuncane Izinkinga zempilo ukubheka. Iningi labafuyi linganikeza imvume yezempilo ekhombisa imiphumela yokuhlolwa okwenziwe ezinjeni ngalezi zimo.
Uma ufisa, ungakuhlola lokhu nge-Orthopedic Foundation yewebhusayithi Yezilwane.
I-Hip Dysplasia : I-Hip dysplasia yisimo esizalwa njengefa esivame ukubonakala ezinjeni ezinkulu zokuzala, noma izinhlobo ezincane nazo zingakuthola. Kwenzeka lapho ithambo lesinqe nelethanga lingasheleli ngokushelela kepha kunalokho liqubuzane. Ngokujabulisayo, lesi simo siyelapheka ngezithasiselo, yize ukuqina kwe-hip dysplasia kungaholela ekuhlinzweni okubizayo.
Uma ubona ukwehla komsebenzi noma ububanzi bokunyakaza, ungahle ufune ukuvakashela i-vet yakho ukuze uhlolwe.
Umfundi wakho futhi angathinta izinkalo zakhe, abe nobuhlungu noma ukuqina futhi kwesinye isikhathi abe yinyonga ekugcineni kwakhe. Ungase futhi uqaphele ukwanda kwemisipha yehlombe nokungathuthuki kwemisipha yethanga.
Ungathola imininingwane eminingi ngalesi simo kusuka ku- I-American Kennel Club .
Isikhumba: Ungahle ungaboni i-dermatitis kumntwana wakho aze aqale ukuyikhotha, bese iyavuvukala, ilume noma ibe luhlaza. Ungayiphatha ngamafutha okugcoba avela ku-vet yakho noma nge-shampoo ehlukile yokugeza.
Ukungezwani komzimba: Ukungezwani komzimba kwesinye isikhathi kungadala i-dermatitis. I-puppy yakho ingahle iguliswe ukudla noma okuthile endaweni okuhlangana kuyo noma okuphefumulela kuyo. Uvimbela ukungezwani komzimba nokudla ngokugwema izithako ezithile.
Udokotela wezilwane wakho angakunika imithi, ukudla okwehlukile, futhi kwesinye isikhathi ngisho namafutha e-CBD ukwelapha ukungezwani kwemvelo.
Udokotela wezilwane wakho angancoma indlela engcono kakhulu ongayithatha ukuvimbela ukungezwani komzimba. Bese ukhumbula; ungahle udinge ukushintsha imvelo ye-pup yakho.
Indlala yegilo Izinkinga: Ongasebenzi yegilo ingaziveza ngezinye izimo ezifana nokulahleka kwezinwele, ukukhuluphala kwesisindo, isithuthwane, ukoma noma izimo zesikhumba. Udokotela wezilwane uzoxilonga i-hypothyroidism ngokwenza izivivinyo ezithile futhi unikeze imidlwane yakho imishanguzo.
Kungadingeka ukuthi abe kulo muthi impilo yakhe yonke, noma umthamo ungashintsha. Udokotela wezilwane wakho uzodinga ukuhlola izinga le-thyroid yenja yakho minyaka yonke njengoba umthamo ungadinga ukushintsha ngokufanele.
Indlala yegilo engasebenzi ngokweqile izodala i-hyperthyroidism, engaholela kumdlavuza.
Yize lokhu kubi kakhulu, odokotela bezilwane bangakulapha. I-AKC ihlinzeka imininingwane engaphezulu maqondana nokwelashwa kwe-hyperthyroidism.
I-Retritis Atrophy eqhubekayo: Lesi simo sizothinta iso lenja yakho. Kungaqala ngobumpumputhe basebusuku futhi kuholele ekungaboni ngokuphelele. Izinja eziningi zingaphila nalesi simo, inqobo nje uma imvelo yazo ihlala ingaguquguquki. Ngeshwa, azikwazi ukwelapha lesi simo, noma ngabe umfuyi angasihlola ngaphambi kokuqhubeka nolayini.
Umbilical Hernia: Lesi simo siziveza njengesigaxa eduze kwenkaba yenja. Uma incane ngokwanele, ingavalwa ngokuhamba kwesikhathi futhi ayidingi ukwelashwa. Kwesinye isikhathi izinja zihlala nama-hernias amancane impilo yazo yonke. I-vet yakho ingasusa i-hernias emikhulu lapho i-pup yakho izothola inzalo, ngoba inobungozi bezimo ezisongela impilo.
Isifo sikaVon Willebrand: Uma uqaphela umdlwane wakho unekhala eligazini noma igazi elithile esitobhini sakhe kodwa kungenjalo kulungile, angahle abe nesifo sikaVon Willebrand. Lesi simo sivimbela igazi ekunqandeni, futhi odokotela bezilwane bangasixilonga lapho inja yakho iphakathi kweminyaka emithathu kuya kwemihlanu ubudala.
AmaVets angayilawula ngokusebenzisa umthungo noma amanxeba okuvimba, ukugwema imithi ethile, nokumpontshelwa igazi ngaphambi kokuhlinzwa.
I-Gastroenteritis eyophayo: Uma ingane yakho iqala ukuhlanza ngokungazelelwe noma inesifo sohudo esinegazi, udinga ukumyisa kudokotela wezilwane. Angasusa ezinye izinkinga eziletha izimpawu ezifanayo ngaphambi kokuphothula ukuxilongwa kwakhe. Ngokujabulisayo, lesi sifo siyelapheka futhi singancipha ezinsukwini ezimbalwa.
Kodwa-ke, inja yakho izodinga ukuhlala ihlanzekile ukuvimbela i-coagulation ye-intravascular, engaholela ekufeni. Udokotela wezilwane wakho angaphinde anikeze ngemithi elwa namagciwane nemithi elwa nezilonda.
Udinga ukwenza ngokushesha futhi unake inja yakho njalo uma usola lesi sifo.
Umdlavuza: Lapho sizwa igama elithi umdlavuza, ubuchopho bethu buvele bugxume buye ekufeni. Ngenhlanhla, odokotela bezilwane bangalapha umdlavuza uma bewuthola kusenesikhathi. Thatha umdlwane wakho ukuyohlolwa njalo nodokotela wezilwane ukuze ubambe noma ikuphi ukuphazamiseka kusenesikhathi. Umdlavuza ungaziveza ngezindlela ezahlukahlukene, ngakho-ke izindlela zokwelashwa ziyahlukahluka.
Ukwelashwa kungaba ukuhlinza noma okwelapha, futhi amazinga empumelelo ancike kumuntu ngamunye.
Ukulindela Ukuphila kwe-Airedale Terrier
Isikhathi sokuphila esimaphakathi se-Airedale Terrier siphakathi kweminyaka eyi-10 nengu-13, okufana nenja usayizi wayo. Vele, lokhu kuya ngezimo zabo zokuphila kanye nempilo yabo iyonke.
Khumbula ukuthi inja yakho ingaba khona isikhathi eside nokuthi ukuyinakekela kuyisibopho esikhulu.
Ngokudabukisayo, umdlavuza uyimbangela ehamba phambili yama-Airedales awela ibhuloho uthingo. Ocwaningweni lwango-2001, ukuguga kwaba nomthelela ekufeni kwabantu abayi-12% ku- iziwe Ezihlangene .
Encwadini elula, uma ubheka ukuthenga noma ukwamukela umdlwane, ufike endaweni efanele.
Ngaphambi kokuletha i-pup yakho ekhaya, udinga ukulungisa imvelo, uthenge amathoyizi nombhede, bese uthola udokotela wezilwane eduze kwakho. I-Royal Canin ikulungiselela lokho ongakulindela uma uthola umdlwane omusha.
Ama-airedale cuties ayatholakala kubafuyi ngamanani aphakathi kuka- $ 1200 kuya ku- $ 3000, kuya ngemvelaphi yawo.
Uma ubheka ukwamukela eyodwa, intengo iphansi kakhulu ku- $ 300 ukumboza izindleko zekenneling. Vele, ukuthenga inja kumfuyi kukunikeza imininingwane eminingi ngemvelaphi yabo.
Ngenkathi ungahle ungakutholi okudingayo ngenkathi usebenzisa inja, uzobe usindisa impilo. Zama ukubheka ukwamukela ngaphambi kokuthenga kumfuyi; ungamthola umphefumulo wakho esitokisini.
Abafuyi be-Airedale Terrier
I-AKC inikeza uhlu olubalulekile lwabafuyi ababhalisiwe ngokusemthethweni. Zikhombisa nokutholakala kwemidlwane kusuka kwezinye izindaba zegazi kanye nemininingwane yokuzalanisa. Ungabuka ngisho nezithombe zabazali nemidlwane zakudala.
Lapho ukhetha umfuyi, qiniseka ukuthi wenza ucwaningo lwakho ngegazi futhi ucele imibhalo yokusula. Bheka iphrofayela yabo bese uqinisekisa ukuthi babhalisiwe.
Bheka iwebhusayithi yabo uma benayo bese ukhuluma nabafuyi. Zama ukuhlangana nabazali bakadoti ngaphambi kokukhetha umdlwane.
Sincoma ukuthi ukhethe umdlwane ojabulayo futhi odlalayo, ongesabi ukusondela kuwe. Ungakhethi umdlwane onamahloni noma lowo ohlukumeza izingane zakwabo.
Uma ungathanda ukubheka amanye ama-furballs amahle atholakalayo, nalu uhlu lwabanye babafuyi:
I-Airedale Terriers Ifuna Amakhaya E-Furever
Indlela elula yokwamukela i-Airedale ukuhamba ngenhlangano egxile kohlobo.
Adopt-a-Pet.com izokwazi ukukunikeza inhlangano eseduze nawe engase ibe ne-Airedales yokutholwa. Zinezinye izilwane uma kufanele ube nentshisekelo yokuthola ingane yakini yengane yakho.
Ezinye zezinhlangano zokusiza zifaka:
Yize lezi zinhlobo zibukeka zifana, a I-Welsh Terrier akuyona i-Airedale. Bheka ukuqhathanisa okulandelayo ukukhombisa ukufana nokwehluka kwabo:
I-Airedale Terrier I-Welsh Terrier
Ukubukeka Isikhathi eside futhi ezemidlalo. Isikhumba esimnyama noma esimnyama. Ijazi elinemithi. Ukuma okuyisikwele, futhi kwezemidlalo. Ijazi elimnyama noma elimnyama noma elimnyama.
Ukuphakama 21-23 ' 13-15 '
Isisindo 40-47lbs 15-20lbs
Ubuntu Iyasebenza futhi izimele. Ungazwana nezinye izilwane. Unenkani. Futhi kuhlakaniphile futhi kuyazivikela. Kuyasebenza, kungabanzima ukuzwana nezinye izilwane. Inobuhlakani futhi iyavikela.
Idethi Yomsuka Ama-1800 Ama-1700s
Indawo Yomsuka INgilandi I-Wales
Umsila omisiwe Cha Yebo
Kunezingxube ezahlukahlukene ze-Airedale nezinye izinhlobo. Sihlola ezinye zazo ngezansi:
Hlangana ne-Airedoodle enhle futhi edlalayo - Umthombo wesithombe
I-Airedoodle ingumxube we-Airedale nePoodle. Baqhamuka kwifayela le- iziwe Ezihlangene , futhi abantu babazala njengabangane babo.
Zikhula ziye kubude obuphakathi kuka-22 no-27 ″ bese zinesisindo esiphakathi kwama-40 nama-65lbs. Azichithi kakhulu kuya ngokuthi yiliphi ijazi lohlobo abalizuze njengefa.
Ungathola eminye imininingwane ngabo lapha .
Inja yeLab’Aire ehlakaniphile nevikelayo - Umthombo wesithombe
ILab’Aires ingumxube phakathi kwe-Airedale neLabrador Retriever. Imvelaphi yabo ayaziwa njengoba bewuhlobo olusha uma kuqhathaniswa.
Abantu banqume ukubanikeza isinkwa njengabangane babo kanye nezinja zokubuka. Ukuphakama kweLab'Aire kuphakathi kuka-22 no-24 ″ nesisindo sabo phakathi kuka-50 no-80lbs.
Zivame ukuba nesifuba esibanzi, futhi amehlo azo ayahluka ngombala phakathi kwe-hazel, nsundu, ne-amber. Wagwalking.com inikeza ulwazi oluthe xaxa ngokunakekelwa kwabo.
USchnairedale, inja enothando futhi emnandi - Umthombo wesithombe
La ma-cuties ayingxube phakathi kweSchnauzer ne-Airedale futhi angadlala kakhulu. Zikhula zifike kuma-22 ″ ukuphakama futhi zinesisindo esifinyelela kuma-50lbs, yize abesifazane bancane kancane.
Imvamisa zifana kakhulu ne-schnauzer, enezici ezinhle ezibomvu noma ze-ginger. Zinezindlebe ezi-floppy ezibonisa izinkulumo zazo ezi-quirky.
Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane ngeSchnairedale.
Lezi izinja ezihlakaniphile yenza kahle izilwane ezifuywayo zomndeni futhi izinja eziqaphile . Bazimele futhi bangazigcina bematasa isikhathi esifushane ngamathoyizi avuselelayo.
Uma ungumuntu osebenzayo, i-Airedale Terrier iphelele kuwe.
Lapho beshiywe bodwa isikhathi eside, bangaziphatha kabi ngokuhlafuna nokukhonkotha. Bangase futhi bagxume uthango noma bambe futhi. Uma ungasebenzi futhi ukhathala ngokushesha, le nja ayifanele wena.
Ingabe Izinja Ziyamamatheka Ngempela? Kuchazwa Isayensi
izinhlobo ze-pit bull nezithombe
inja enhle enkulu amagama wesilisa
kuphephile yini ukunikeza izinja ikhabe